“म संगै जापान जाने संगै बस्ने जिवन साथी चाहियो मेरो पुरा विवरण हेरी सम्पर्क गर्नुहोस् बिश्वास नलागे पढ्नुहोस” | Taja Khoj Khabar
Posted by Taja Khoj Khabar On February 14, 20190Comment
म संगै जापान जाने संगै बस्ने जिवन साथी चाहियो मेरो पुरा विवरण हेरी सम्पर्क गर्नुहोस् !म साधारणा लेखपढ भएकाे एउटा गाउकाे केटी हु । मेराे घर पूर्वकाे दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडाैमा बसाेबास गरर म काठमाणडाैमा पढदैछु बेचुलर रनिङमा छु । मेराे पढाइकाे विषय मेनेजमन्ट विषायमा पढछु त्यसकारणा जापनजानकाे लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरी सके त्यस कारण मैले याे साेचेकी म त पढन जाने हाे ।
मेराे लगभग उमेर पनि पुगी सकेकाे छ । साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ । अनि मलाई पनि साहारा हुनछ । भन्ने मेराे मनमा एउटा विचार अायाे । उत विचार मैले मेराे घरमा बा अामालाइ पनि भने, र बा अामाबाट पनि त्याे कुरा लाई स्विकार गर्नुभयाे । मैले लगभग २, ३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएकाे २२ बर्ष नाघेकाे केटा पनि खाेजे तर भने जस्ताे पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फर्केर अाए ।
भन्ने विश्वासलागेकाे छ । यदि तपाइमा मैले भने जस्ताे गुणाहरू छ भने मात्र मलाइ मेजेस गर्नुहाेला नत्र पिलिज तपाइहरूले दुख नगरीदुनु हुन अनुराेध सबैमा गर्दछु । मैले अाज सम्म अाइपुग्दा धेरै दुखहरू भाेगेकाे हुदा खेरी उत दुखलाइ बुझनेखालकाे केटा चाहिएकाे हाे । मेराे हरेक पाइा पाइलामा साथ दिने म संगे सधे वस्ने, म संगै रमाउने मेहेनति लपनझपन नभएकाे हुनु पर्नेछ । यसकारणा पनि मैले त्यस्सताे खालकाे केटा खाेजेकाे हाे
अन्य समाचार,डा.मिना झा भन्नुहुन्छ महिलाको मासुपलाउदै मा पाठेघर नै काटेर फाल्नु पर्दैन, यसरी सजिलै सँग सामाधान गर्न सकिन्छ ?तपाइ पनि एक शेयर गर्नुहोस ! बनेपाकी ३० वर्षीया शर्मिला (नाम परिवर्तन) लगातार रक्तश्राव भएपछि चिकित्सककहाँ पुगिन्। अल्ट्रासाउण्ड गरेपछि चिकित्सकले भने, ‘पाठेघरमा मासु पलाएको छ, तुरुन्त अप्रेशन गर्नुपर्छ ।’ एक सन्तानकी आमा शर्मिला चिकित्सकको कुरा सुनेर आत्तिइन्। उनले औषधि खाएर निको हुन्छ कि ? भनेर सोधिन् पनि।
तर, चिकित्सकले पाठेघरमा मासु पलाएकोले पाठेघरै फाल्नुपर्ने दोहो¥याए। दोस्रो सन्तानको योजनामा रहेका शर्मिला र उनका पतिका ला गि सुखद् समाचार थिएन यो । उनको उमेर पनि त ३० वर्ष मात्रै थियो। चिकित्सकले अप्रेशनबाहेक अर्को उपाय नभएको बताएपछि उनीहरुले अप्रेशनका लागि मिति समेत लिए।
Previous: सुन रङ्गको नाग देख्नेको भाग्य खुल्छ रे!! नाग देखेको ३ सेकेन्डमा कमेन्टमा ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला !
Next: सुत्नु अघि चोखो मनले मुक्तिनाथको दर्शन गरेर भेटि सरुप एक शेयर गरेर भोलिको राशिफल पढ्नुहोस !